‘दबंग ३’ को पहिलो दिने कमाई ठिकठाक « THULOPARDA.COM
‘दबंग ३’ को पहिलो दिने कमाई ठिकठाक
Published On : December 21, 2019
सलमान खानको ‘दबंग ३’ ले बक्सअफिसमा ठिकठाक सुरुवात गरेको छ । चलचित्रले पहिलो दिन घरेलु बजारमा २४ करोड ५० लाखको व्यापार गरेको छ । ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्शले चलचित्रको फर्स्ट डे कलेक्सन सामाजिक सञ्जालमार्फत् सार्वजनिक गरेका हुन् । यो चलचित्रले सबै भर्सनबाट २४ करोड छापेको हो ।
चलचित्र रिलिजभन्दा अगाडि ‘दबंग ३’ ले पहिलो दिन ४० करोडको आसपासमा व्यापार गर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, चलचित्रले २५ करोडको आँकडा पनि पार गर्न सकेन । अहिले भारतका विभिन्न स्थानमा नागरिकता संशोधन एक्टको विरुद्धमा प्रदर्शन चलिरहेका कारण त्यसको असर चलचित्रको व्यापारमा परेको हुनसक्ने कतिपयको विश्लेषण छ ।
‘दबंग ३’ ले पहिलो दिन अपेक्षाकृत व्यापार गर्न नसके पनि यसले कयौं चलचित्रको रेकर्ड तोडेको छ । प्रभुदेवाको निर्देशनमा बनेको चलचित्रले सलमानको सात चलचित्रलाई पछाडि छाडेको छ । यसमा दबंग (१४.५० करोड), वीर (७ करोड), रेडी (१३.१५ करोड), बडीगार्ड (२१.६ करोड) , दबंग २ (२१.१० करोड), जय हो (१७.७५ करोड), ट्यूबलाइट (२१.१५ करोड) सामेल छ ।
‘दबंग ३’ मा सलमानसँगै सोनाक्षी सिन्हा, सई मान्जरेकर, अरबाज खान, प्रमोद खन्ना पनि प्रमुख भूमिकामा छन् । त्यस्तै, भिलेनको रोलमा साउथका सुपरस्टार सुदीप किच्चा छन् । चलचित्रलाई अरबाज खानले निर्माण गरेका हुन् । ‘दबंग’ को दोस्रो पार्ट सन् २०१२ मा आएको थियो । चलचित्रको कथा सलमान स्वयंले लेखेका हुन् ।
पहिलो दिन कति छाप्यो ‘मलंग’ ले ?
चलचित्र ‘कलंक’ पछि अभिनेता आदित्य रोय कपुरको नयाँ चलचित्र ‘मलंग’ रिलिज भएको छ । यो
‘बागी ३’ ट्रेलरमा टाइगरको दमदार एक्सन (भिडियो)
बलिउडका एक्सन स्टार टाइगर श्राफ र अभिनेत्री श्रद्धा कूपर अभिनीत चलचित्र ‘बागी ३’ को ट्रेलर
‘स्ट्रिट डान्सर’ मा नेपाली डान्सर सुशान्तको अभिनय
नृत्य विधामा आधारित भएर निर्माण भएको बलिउडको यस वर्षको प्रतिक्षीत चलचित्र ‘स्ट्रिट डान्सर’ थ्रीडिमा नेपाली
‘करन अर्जुन’ को रिमेक बन्ने !
बलिउडका चर्चित चलचित्र निर्माता हुन्, राकेश रोशन । उनले निर्माण गरेका चलचित्रहरु प्राय: हिट रहेका